साहसी तीनबुढाको साइकलद्वारा तिब्बतयात्रा_china.com
साहसी तीनबुढाको साइकलद्वारा तिब्बतयात्रा
तिब्बत धेरैले अवलोकन गर्न मन पराएको ठाउँ हो। कोही विमानबाट त्यहाँ पुग्छन् भने कोही रेलवेबाट पुग्छन्। अनि कोही आफैँ गाडी चलाएर पुग्छन्। तर तिब्बत घुम्ने यस्ता तीनजना बूढा छन्，उनीहरुको ‌औसत उमेर साठ्ठीभन्दा माथि छ। उनीहरुले सेवाबाट सन्यास लिएपछिको आनन्द जीवन बिताउनु पर्ने हो तर स छ्वान-तिब्बत राजमार्गबाट साइकल चढेर तिब्बत जाने निर्णय उनीहरुले गरे। उनीहरुले किन यस्तो निर्णय गरे? अनि बाटोमा केकस्तो समस्या देखियो भन्ने बारेमा छोटो चर्चा गरौँ।
बीस दिनको तयारी गरेपछि उनीहरुको साइकल यात्रा सुरु भयो। छङ तुदेखि ल्हासासम्मको दुई हजार किलोमिटरभन्दा लामो बाटोका लागि उनीहरुले पचीस दिनमा यात्रा समाप्त गर्ने निर्णय गरे। स छ्वान-तिब्बत राजमार्गमध्यको 318 नं भाग नै छङ तुङबाट ल्हासा पुग्न जानुपर्ने बाटो हो र यसलाई चीनको सबभन्दा सुन्दर राजमार्गको रुपमा मुल्याङ्कन गरिन्छ साथै धेरै साइकल चढ्न मन पराउने व्यक्तिका लागि उत्कृष्ट राजमार्ग पनि हो। बाटोमै विशाल तथा सुन्दर दृश्यले मानिसलाई प्रेरणा दिन्छ तर बाटोको जटिल अवस्थाले ठूलो चुनौति पनि दिन्छ। एकदम लामो बाटो, उच्च समुद्र सतहमा लगातार रुपमा यात्रा गर्नुपर्छ, पहाडी बाटोमा चढ्नुपर्छ, खराब मौसम, यत्रा चुनौतिहरु यी बूढाले सामना गर्नसक्छन् त?
हिजो हामीले4हजार2सय 98 मिटर अग्लो चतो पहाड चढ्यौँ। आज4हजार4सय मिटरको काउ अर स पहाड चढ्छौँ।
यो भनाइ फाङ खोन युआनको हो। साइकल टोलीमा सबभन्दा बूढो सदस्य फाङ खोन युआन हुन्। अहिले 64 वर्षका उमेर पुगेका फाङ खोन युआनले चार वर्षको साइकल यात्राको अनुभव लिए तर पठारमा यत्रो दूरीसम्म चढेको यो पहिलो पटक हो। अघि त उनले सबभन्दा बढीमा लगातार पाँच छ दिनसम्म चढे। टोली गठन हुँदा तीन सदस्य मात्रै थिए। छङ तु छोडेको पहिलो दिनमा चौथो सदस्य थपिए। छ दिनसम्म चढेर टोली छङ तुभन्दा पाँच सय किलोमिटर टाढाको या च्याङ जिल्लामा पुग्यो र “साइकल साथीको घर”मा बस्यो। त्यहाँ विशिष्ट तिब्बती शैलीको साना साना बास बस्ने घरहरु छन्। तीन तले होस्टेल जस्ता ती बासस्थानमा जम्मा गरी दशौँ साइकल यात्रीलाई खान-पिउन र बस्न उपलब्ध गराइन्छ। होस्टेलको पहिलो तला साइकल पार्किङ स्थलको रुपमा बनाइएको छ। तीस वर्गमिटरभन्दा ठूलो क्षेत्रमा विभिन्न साइकल पार्किङ हुन्छ। हलको पर्खाल ग्राफिटी पर्खालले बनेको छ। यात्रीले आ-आफ्नो भावना, इच्छा आदि त्यसमा लेख्छन् र रंग लगाउँछन्। जस्तो भनौँ त्यसमा पेन्टिङ गरिएको “साइकल लिएर हिड्न नहुने” । “साइकल लिएर हिड्न नहुने”बाट साइकल यात्रीको आत्मविश्वास र दृढता देखिन्छ। तर वास्तवमा चार पाँच हजार मिटर अग्ला पठारमा लगातार रुपमा चढ्नुपर्ने नं 318 राजमार्गको लागि “साइकल लिएर हिड्न नहुने” लाई व्यवहारमा उत्तार्न गाह्रो छ।